Nooca Riix Mashiinka Buuxinta Mascara, Mashiinka Calaamadda Flat - Eugeng
Eugeng waa xirfadle hal abuur leh soona saare mashiinada la isku qurxiyo ee Shanghai. Waxaan si xamaasad leh ugu dadaalnaa inaan kor u qaadno waa sumcadda sii kordheysa ee ku dhex jirta warshadaha qurxinta iyadoo la kulmeysa baahiyaha wax soo saarka macaamiisha, waxaanna bixin doonnaa tiknoolajiyada ugu dambaysa uguna sarreysa iyo macluumaadka xalka ugu habboon iyadoo had iyo jeer laga horreeyo baahida macaamiisha. Mashiinnadayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah mashiinka buuxinta dhalaalka dhalaalaya, mashiinka buuxinta mascara, mashiinka buuxinta ciddiyaha, mashiinka buuxinta kulul, mashiinka buuxinta bushimaha, mashiinka buuxinta lipstick, mashiinka buuxinta kareemada wareega, mashiinka wax lagu buuxiyo ee budada la isku qurxiyo, mashiinka buuxinta budada dabacsan, mashiinka samaynta budada dubay , Mashiinka calaamadeynta mascara gloss dibinta iwm.
Fikradaheena sumadeed waa "caafimaad, mood, xirfadle". Kaliya aqoonsiga macaamiisha ayaa ka tarjumi kara qiimaheena. Tayada wax soo saarka ayaan u dhigeynaa meesha ugu horeysa!
Marka hore, isku darka, 1 dhigay 20L taangiga isku dhafan; Xawaaraha isku qasiddu waa la hagaajin karaa; Mashiinka wax lagu xoqo wuxuu si fudud u qaadaa oo dib isugu laabaa; Waqtiga CW iyo waqtiga CCW waa la hagaajin karaa; Taangiga ayaa 90degree kara inuu udaarato si fudud marka labaad, extrusion, 1 set 10L tank; Wareeji ...
Sanadka 2020, waxaan kaqeyb galnaa carwada CBE ee Shanghai laga bilaabo 8-da ilaa iyo 12-keeda. Waxaan soo bandhigeynaa badeecadaheena ugu muhiimsan, sida mashiinka buuxinta dhalaalka dhalaalaya ee wareegaya, nooca riixida mashiinka mascara mashiinka buuxinta, mashiinka riixaya budada yar, mashiinka calaamadda jiifka, qurxinta ...